Aaska gabar la kufsaday oo la qabtay - BBC Somali - Warar
Aaska gabar la kufsaday oo la qabtay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 December, 2012, 11:11 GMT 14:11 SGA
Xasuus looga sameeyay gabadha la xoogay ciida Badda.
Mudaaharaadyo lagu doonayo in la adkeeyo maanka dumarka reer Hindiya ayaa ka socda wadanka oo dhan.
Sida caadada ay tahay dadka haysta diinta Hinduga waxaa la gubay maydkii gabar 23 jir ah oo lagu kufsaday magaalada Delhi dalka Hindiya.
Gabadha oo ay lix nin ku xoogeen bas socda ayaa laga tuuray baska markii la xoogay kadib. Arrintan ayaa ka xanaajisay dad badan waddanka oo dhan, waxaana socda mudaaharaadyo lagu muujinayo amaan la'aanta haysata dumarka dalka Hindiya.
Qaar ka mid ah jidadka Delhi ayaa xiran iyo dhowr meelaha laga raaco tareenka.
Ra'iisalwasaaraha Monmahan Singh iyo hogaamiyaha xisbiga talada haya Sonia Gandhi ayaa la kulmay reerka gabadha , waxayna u balanqaadeen in isbadal la samaynayo si loo sugo ammaanka dumarka.
lixda nin ee lagu eedeynayo dilkeeda, hadii danbiga lagu helo waxaa horyaala xukun dil ah.